Ulwazi lokuyekiswa kwecuba kubaboneleli ngeVermont- 802Quits
Iinkqubo zokuPhelisa iVermont
Yeka uLwazi lwaMayeza
Ulutsha kunye nabantu abadala
Ukwenza iikhowudi kunye nokuhlawula
Ikhaya » ABABONELELI
Akuzange kubekho ixesha elibaluleke ngakumbi lokuba izigulana zakho ziyeke.
Inkuthazo yakho, uvelwano kunye neengcebiso zibalulekile kulo lonke uhambo lokuyeka. Singakunceda ngezo ncoko.
Buza kutyelelo ngalunye. Ukuba isigulana sakho asibonakali "silungile," okanye ukuba bazamile amaxesha amaninzi, ungabakhuthaza ukuba bacinge ngokuyeka ngokucela nje. Sebenzisa ezi Amanqaku okuthetha (PDF) iphuhliswe ngababoneleli ngeVermont.
Jonga kuma-802Quits. Iinkqubo ezahlukeneyo zokuyekiswa kwabantu abadala kunye nolutsha zivumela abaguli bakho ukuba bafumane oko kubasebenzelayo. Izixhobo zisimahla kwaye zibanzi kwaye ziyafumaneka kwi-intanethi, ngobuqu, ngefowuni, ngokubhaliweyo kunye nokufikelela kunyango lokutshintsha unyango lwe-nicotine (i-NRT), kubandakanya iipatches zasimahla, intlaka kunye neelogs. I-NRT iyafumaneka kubantu abadala abayi-18 + kwaye kuyacetyiswa ukuba kungabikho ilebheli emiselweyo yokuyalela ulutsha olungaphantsi kweminyaka eli-18 ubudala olungamodareyitha okanye olunobukrakra kwi-nicotine kwaye lukhuthazwa ukuba luyeke.
Izixhobo ezenzelwe wena ziyafumaneka kubemi abakhethekileyo Amalungu eMedicaid, LGBTQ, AmaNdiya aseMelika kwaye IiVermonters ezikhulelweyo.
Isixhobo sezixhobo zokuyekisa abaBoneleli
Khuphela izixhobo kunye nezixhobo eziqulunqwe kule ndawo, kubandakanya amanqaku athethwayo, izixhobo zezigulana, izikhokelo, imiboniso kunye neefom ezinxulumene nokubandakanya izigulana kwiingcebiso zokupheliswa kwecuba, ngokubhekisele kwi-802Quits, iinkqubo zokuyekiswa kweVermont, ukuyeka amayeza kunye nolutsha.
INew American Thoracic Society isikhokelo sonyango kunyango lokuxhomekeka kwecuba kubantu abadala.
Isikhokelo sokuziqhelanisa neklinikhi yowama-2020 siqulethe iingcebiso ezisixhenxe ezintsha ezinotshintsho olulula lokuziqhelanisa olunokunyusa ukusebenza ngokunyanga kwemithi yokuxhomekeka kwicuba. Iingcebiso ezimbini zibandakanya:
Kubantu abadala abaxhomekeke ekutshayeni apho kuqaliswa khona unyango, sicebisa i-varenicline ngaphezulu kwenqaku le-nicotine.
Kubantu abadala abaxhomekeke kwicuba abangakulungelanga ukuyeka ukusebenzisa icuba, sicebisa ukuba oogqirha baqale unyango nge-varenicline kunokuba balinde de izigulana zikulungele ukuyeka ukusebenzisa icuba.
Funda isikhokelo esitsha ngazo zonke iingcebiso ezisixhenxe kwiJenali yaseMelika yoNyango kunye noNyango oluKhuselekileyo.
Bukela ividiyo yemizuzu emi-2 Ukushwankathela isikhokelo esitsha.
IziBonelelo zokuPheliswa koTywala
Kulula ngoku kunakuqala ukunceda abaguli bakho bayeke. Kwaye iiVermonters ezininzi azizazi izibonelelo ezibanzi ezifumaneka ngeMedicaid kunye nenkqubo ye-802Quits yokupheliswa kwabantu abadala nolutsha.